Nagu saabsan - Shandong Essar Import iyo Dhoofinta Ganacsiga Co., Ltd.
Shandong ESSAR wuxuu ku yaalaa magaalada quruxda badan ee Liaocheng, Gobolka Shandong ee Shiinaha.
Waxaan inta badan soo saarnaa oo aan siino gariiradda biraha galvanized kulul, gariiradda Galvalume, gariiradda steel PPGI, sheet bir jiingado, FRP caag saqafka iyo waddooyinka waardiyayaasha ayaa si ballaaran loo codsadaa in warshadaha baabuurta, qalabka guriga, warshadaha dhismaha, iyo dhismaha jidadka ilaaliya jidadka waaweyn, iwm.
Waxay ku takhasustay soo saarista iyo iibinta xaashida / gariiradda birta ah (160,000 tan tan sanadlaha ah), xaashida birta jiingadda ah (sanadlaha 80,000 tan), xaashida saqafka sare ee FRP (sanadle dhan 1,800,000 mitir) iyo ilaalinta wadada weyn (sanadlaha 200,000 tan). waa qiyaastii RMB 1.85 bilyan oo Yuan, canshuurta macaashkuna waa kudhowaad RMB 143 milyan Yuan. Tusmada waxqabadka badeecada waxay gaartay heer heer sare ah oo gudaha ah
Wax soo saarkayaga waxaa si duurjoog ah looga iibiyay Waqooyi Bari, Waqooyiga Shiinaha, Bariga Shiinaha, iwm sidoo kale waxaa loo dhoofiyay Europe, Mid-America, Afrika, iyo Koonfur Bari Aasiya, iwm.
Iyada oo fikirka istiraatiijiyadeed ee ku dadaalaya badbaadada iyada oo ku saleysan tayada iyo horumarka ku saleysan faa'iidada, iyadoo la raacayo fikradda maamulka ee "iimaanka, wax ku oolka ah, hal-abuurnimada, iyo horumarka", waxaan leenahay geesinimo si aan ula tartano, oo aan u sii wadno hal-abuurnimada joogtada ah ee tartanka. Waxaan sidoo kale sameyneynaa dadaalkeena aan kala go 'lahayn si aan ula dagaallanno geesinimo abuurista summad qaran iyo sumad caalami ah. Iyada oo la xirayo ganacsadaha indheer garadka ah ee qaabka iyo ruuxda daacadnimada, dhammaan shaqaalaha shirkadeena waxay diyaar u yihiin inay iskaashi iyo horumar wadajir idinla yeeshaan.